We don't all learn the same way - Communication style ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံတစ်မျိုးတည်း သင်ယူလေ့မရှိကြပါ ﻿
We don't all learn the same way - Communication style ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံတစ်မျိုးတည်း သင်ယူလေ့မရှိကြပါ
Tags: jobless jobs in myanmar job my job good job career work communication style
See it, hear it, or do it - the impact on those simple observations is more profound than we might realize. These three aspects of communication and learning styles, visual, auditory and kinesthetic can be seen in;
Are clear on the issue
Have the perspective
Can be foggy on the details
Show you results
Visual learners/communicators emphasize what is seen, rather than what is heard. Sometimes visual learners ,,do not see your point,,.
Hears what you are saying
Sounds you out on an idea
Wants to be in tune with the group
Likes to discuss the details
Does not want to be off-key
If you are an auditory/communicator, discussing and hearing the information will most effectively accelerate your learning.
Likesahands-on approach
Can get out of synchronization
Want to be in touch with you
Senses the ,,vibes,,
Can be clumsy on details
Kinesthetic learners/communicator require less visual and verbal information and more opportunities to practice and participate in the skills, process or information being presented.
ကြည့်ပါ။ နားထောင်ပါ။ လိုက်လံဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုနည်းစနစ်များသည် ကျွန်ပ်တို့ထင်ထားသည့်ထက် ပိုမိုနက်နဲသောအရာများဖြစ်သည်။
အမြင်ဖြင့်သင်ယူသူများ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံသူများသည် မြင်သည့်အရာ၊ ကြားသည့်အရာများကို အလေးထားတတ်ကြသည်။ သို့သော် တခါတရံသင်ယူသူများသည် ပြောလိုသည့်အချက်ကိုမမြင်တတ်ကြပါ။
အကယ်၍သင်သည် အသံဖြင့်သင်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ ဖော်ပြသူဖြစ်ပါက ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းများသည် သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဟန်အမူအရာဖြင့်ဖော်ပြသူများသည် အမြင်နှင့်အကြားဖြင့်တင်ပြမှုများကိုလိုအပ်မှုနည်းပြီး တတ်ကျွမ်းမှုနည်းပညာများကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပေသည်။